Tohano ny dokotera tsy misy fetra miaraka amin'ny WoW Charity Pet Program | Vaovao, Shadowlands | WoW Guides | WoW Guides
Tohano ny dokotera tsy misy fetra miaraka amin'ny programa WoW Charity Pet
Ity no fotoana ahafahanao mandray anjara amin'ny valinteny manerantany momba ny COVID-19 miaraka amin'ny Program Charity Pets an'ny World ny Warcraft. Ny fanomezana ataonao dia handeha ho any amin'ny fikambanana dokotera tsy misy sisintany, ary handray anjara amin'ny fanomezana biby fiompy famoizana zaza roa ho an'ny fiarahamonina World ny Warcraft.
Nanao fanovana izahay tamin'ny fomba fiasan'ny programa fiompiana biby fiompy, ary mandritra ity fampielezan-kevitra ity dia afaka manome ianao mivantana ny vola tianao ho an'ny Doctor tsy misy fetra. Eo anelanelan'ny 26 aprily 2021 (na rehefa tratra ny tanjona efa napetraka mialoha), ny fanomezana rehetra dia handeha any amin'ny Coronavirus Crisis Fund of Doctors without Border hanohanana ny valinteny manerantany ataon'ny fikambanana manoloana ny areti-mandringana sy ny vokany. (MSF-USA no hiandraikitra ny fanangonana ireo fanomezana).
Hanaraka ny fanomezana izahay, ary rehefa mahatratra 500 $, dia ho azon'ny mpilalao rehetra ao amin'ilay lalao ilay gidro Banana. World ny Warcraft** maoderina ho mariky ny fankasitrahana, na nanome ianao na tsia.
Fanampin'izay, raha mahatratra ny isa $ 1 tapitrisa isika, dia hahazo biby hafa ny tsirairay: ilay Margarita kamo. Ity dia biby fiompy vaovao azonao entina eo an-tsorokao!
Ny tranonkalanao dia tsy manohana ny lahatsary.
Teraka tao amin'ny iray amin'ireo nosy manamorona ny moron'ny Stranglethorn Vale ny akondro kely ary zanakalahin'ny Mpanjaka Mukla, mpitarika masiaka an'ny Gorillas Selestialy. Soa ihany, tsy toy ny rainy ny akondro, ary ny hatsaram-panahiny no mahatonga azy ho mpiara-dia aminy mety tsara hamirapiratra ny andronao any Azeroth sy any aoriana.
Mifanerasera amin'i Margaret, iray amin'ireo ravina milamina indrindra ao Azeroth rehetra. Mialà sasatra eo anelanelan'ny ady mba hankasitrahana an'izao tontolo izao amin'ny hafainganao manokana. Rehefa miantso fitsangatsanganana indray dia ampiasao / sonia ary hiakatra eo an-tsorokao izany.
Mandehana mamaky ny tranonkala MSF DonorDrive ary tsindrio ny bokotra "Donate To This Event" eo ambony.
Ampidiro ny vola tianao homena ary safidio ny karazana vola ao amin'ny drop-down.
Ho an'ny US dolara fotsiny: safidio ny PayPal, Amazon Pay, na ny carte de crédit ho fomba fandoavam-bola.
Ho an'ny vola hafa rehetra: kitiho ny "Next" ary ampidiro ny faktioran'ny carte de crédit anao sy ny antsipirian'ny fandoavam-bola.
Tsindrio ny "Pay" hanodinana ny fanomezana.
Miverena amin'ny tranokala im-betsaka araka izay tianao hanarahana akaiky ny fivoarana amin'ilay endrika efa niorina na hanome fotoana bebe kokoa.
Manomeza fanomezana izao
Ho fanampin'izany, amin'ny alàlan'ny MSF's DonorDrive, ny mpilalao dia afaka mitondra ny sakaizany sy ny vondrom-piarahamonin'izy ireo miaraka amin'ny safidy hampiasa extension Twitch manokana izay ahafahan'ny mpamorona atiny handamina fampielezan-kevitra amin'ny fantson'izy ireo rehefa manara-maso ny fandraisany anjara avy amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo. Mandehana mankany amin'ny tranokala MSF DonorDrive ary tsindrio ny bokotra «Hisoratra anarana izao!» (misoratra anarana, ankavanana ambony) hisoratra anarana ny fampielezam-peoo. Ho fanampin'izay, any ianao dia afaka mahita ny toro lalana sy ny fitaovana kitapo ho an'ny famerenana amin'ny laoniny MSF.
Momba ny dokotera tsy misy fetra:
Dokotera tsy misy fetra dia fikambanana iraisam-pirenena momba ny fitsaboana-fanampiana mahaolona izay manampy ireo iharan'ny loza voajanahary na olombelona, ​​fifandonana mitam-piadiana, valanaretina ary tsy fahatomombanana ara-pahasalamana any amin'ny firenena 70 mahery. Ny ekipan'izy ireo dia manolotra fanampiana ara-pitsaboana fototra ho an'ireo izay mila izany indrindra nefa tsy misy fanavakavahana mifototra amin'ny firazanana, miralenta, fivavahana na ideolojia politika.
Momba ny Coronaavirus Crisis Fund:
Manoloana ny krizy manerantany tsy mbola nisy toa azy noho ny areti-mifindra coronavirus dia namorona ilay antsoina hoe Coronavirus Crisis Fund i MSF.
Ity famatsiam-bola ity dia mikendry ny hanangona vola ho valin'ny COVID-19 sy ny vokany. Izy io koa dia ahafahan'izay te-hanome vola mba hanomezana antoka fa ny fanomezany dia mandeha amin'ireo hetsika manokana ireo. Ny vola voaangona dia hampiasaina hanohanana ireo hetsika MSF mifandraika amin'ny COVID-19 erak'izao tontolo izao, ao anatin'izany ny fitsaboana ireo marary COVID-19, ary koa ny vokatr'io aretina io amin'ny tetikasanay mahazatra.
Ny tanjon'ny valin'ny MSF manerantany momba ny COVID-19 dia:
Ajanona, ahenao na tara ny fihanaky ny viriosy.
Omeo fitsaboana ny marary, indrindra ireo tranga matotra indrindra.
Ahenao kely ny fiatraikany amin'ny rafi-pahasalamana sy ny fiarahamonina.
Mizarà vaovao momba ny fepetra fisorohana manohitra ny aretina sy ny loza aterak'izany.
Hatsarao ny fahazoana rano, fidiovana ary kojakoja fanadiovana.
Omeo fikolokoloana ho an'ireo marary marary mafy amin'ny toerana misy loharanom-bola voafetra.
Ny ankamaroan'ny vola dia handeha:
Ny fahazoana fitaovana ara-pahasalamana, toy ny oxygen ho an'ny marary na fitaovana fiarovan-tena ho an'ny mpiasa.
Ny famoronana faritra mitokana amin'ny rafitra, tobim-pahasalamana na hopitaly, miankina amin'ny Dokotera tsy misy fetra sy fikambanana hafa.
Fanofanana ny mpiasa amin'ny fikarakarana ny marary amin'ny COVID-19.
Ny fampiharana ny fepetra fanaraha-maso sy fisorohana aretina, izay misy ny fisafidianana sy ny fanolorana ireo marary, ankoatry ny hetsika hafa.
Ny fahalalanao vola amin'ny Coronavirus Crisis Fund dia hahafahanay manome fitsaboana maika izay ilana izany ary hanohy hiasa any amin'ny firenena 70 mahery hanohitra ny vokatr'io aretina vaovao io.
* Ny fanomezana dia tsy misy sarany fanodinana, fampodiana, famerenam-bola, ary haba ampiana na haba hafa mitovy amin'izany.
† Mila World ny Warcraft
** Bananas sy Margarita dia ho azo takiana amin'ny kaontinao Blizzard Battle.net ao anatin'ny andro vitsivitsy aorian'ny tanjon'ny fanomezana mifanaraka aminy ary ho vonona mandritra ny fotoana voafetra hatramin'ny 2 aogositra 2021. Tsy misy ny biby World of Warcraft® Classic o World of Warcraft®: Mirehitra Crusade Classic. Margarita dia hovidiana ao amin'ny Blizzard Store na fivarotana lalao amin'ny 3 aogositra 2021. *
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » About us » Tohano ny dokotera tsy misy fetra miaraka amin'ny programa WoW Charity Pet
Fitsapana ny fomba 20-24 martsa: Raiso ny lampihazo
Mitsitsia 20% amin'ny World of Warcraft: Shadowlands